Porn သင့်လိင်အသက်ကိုဖျက်ဆီးသလဲ? Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် - ရောဘတ် Weiss LCSW, CSAT-S
Porn သင့်လိင်အသက်ကိုဖျက်ဆီးသလဲ? ရောဘတ် Weiss LCSW, CSAT-S
Posted: 09 / 24 / 2013 - POST လင့်ထားသည်
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများမှာပုံမှန်အားဖြင့်မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ Porn ပံ့ပိုးသူများသည်ကြော်ငြာဝင်ငွေတိုးမြှင့်ရေးအတွက်သူတို့၏နံပါတ်များကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ညစ်ညမ်းမှုမရှိသောတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည်ပြproblemနာ၏နေရာအနှံ့ပြန့်နှံ့မှုကိုပြသနိုင်ရန်အတွက်သူတို့တွေ့ရှိနိုင်သောအမြင့်ဆုံးသောစာရင်းများကိုရယူကြသည်။ အများဆုံးကွန်ဆာဗေးတစ်စာရင်းအင်းခန့်မှန်းမှုများကပင်အွန်လိုင်းအသုံးပြုနိုင်မှု၊ တတ်နိုင်မှုနှင့်အမည်ဝှက်မှုတို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မြင့်တက်နေသည်။ သင်သုံးစွဲသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပမာဏထက်သင် ပိုမို၍ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအရာသည်သင်၏လိင်ဘဝအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။
porn အသုံးပြုမှုတက်, ပျော်ရွှင်မှုကျသွား
လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်သူ ၆၈ ဦး ကိုမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်စစ်တမ်းတစ်ခုအရ ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းကညစ်ညမ်းမှုသည်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သောသုံးပုံနှစ်ပုံနီးပါးမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်ယောက်ျားနှင့်ပတ်သက်သောယောက်ျားနှင့်ပတ်သက်သောမျှော်လင့်ချက်ကိုပြောင်းလဲစေသည်ဟုထင်မြင်ခဲ့ကြပြီး၊ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသမီးများသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူတို့ယခုကဲ့သို့ခံစားရတယ် porn ကြယ်ပွလိုပဲအလုပ်လုပ်တယ်ရမယ် အိပ်ခန်းထဲမှာ။
အခွားသောစစ်တမ်းများအလားတူတွေ့ရှိချက်များကိုပေး။ ဥပမာအားဖြင့်, တဦးတည်းလေ့လာမှုထင်ရှား (အမျုိးသမီး၏ခန့်မှန်းချက်အရ) အပြာစာပေများကိုမကြာခဏကြည့်ရှုသောမိတ်ဖက်များကအများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမသုံးသော (သို့) အများအားဖြင့်မသုံးသောအမျိုးသားများနှင့်ပူးပေါင်းသည့်အမျိုးသမီးများထက် (သူတို့၏အမျိုးသမီးများအရခန့်မှန်းချက်အရ) သူတို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်ပျော်ရွှင်မှုနည်းကြောင်းအမျိုးသမီးများသိထားသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရမိန်းမတွဲဖက်၏လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုတိုးလာသည်နှင့်အမျှအမျိုးသမီးမိတ်ဖက်၏မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုလျော့နည်းသွားသည်။ အများအားဖြင့်အများအားဖြင့်အများအားဖြင့် porn ကိုအသုံးပြုကြသောအမျိုးသမီးများ၏တိုင်ကြားချက်သည်အွန်လိုင်းပေါ်ရှိရုပ်ပုံများကိုတိုင်းတာ။ မရပါ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, သို့သော်, up ပြုလုပ်တိုင်းစိတ်ပူဖြစ်သင့်သူကိုယောက်ျားဖြစ်ပါတယ်။ ရောဘတ်တစ် 26 နှစ်အရွယ်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာကိုစဉ်းစားပါ:
ကျွန်ုပ်၏ရည်းစား Melissa သည်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။ သူသည်တနင်္ဂနွေနေ့များအိမ်သို့ပြန်လာပြီးကျွန်ုပ်နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းနေသည်။ ကျွန်မတို့ရဲ့လိင်ဘဝဟာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတည်းကကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။ သောကြာနေ့ညတွေကိုကျွန်တော်တကယ်မျှော်လင့်နေခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပျက်လာမယ့်ပထမ ဦး ဆုံးအဖြစ်အပျက်ကငါတို့ပူနွေးပြီးချွေးစေးတွေ၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်အိပ်ရာထဲကိုရောက်သွားတာပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ (ကျွန်ုပ်) pent-up ဖြစ်သောလိင်စွမ်းအင်သည်များသောအားဖြင့်မြန်ဆန်သောအစည်းအဝေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်တွင်ထိုညတွင်ရေချိုးခန်း (အတူတူ)၊ ရင်ခုန်စရာညစာစားခြင်းနှင့်ပိုမိုဖျော်ဖြေသောအချစ်ဇာတ်လမ်းများထွက်ပေါ်လာသည်။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က, ငါတစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နှင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရုန်းကန်ခဲ့, တခါတရံငါသုတ်သင်လို့မရပါဘူး။ ငါတို့သည်အရင်ကကဲ့သို့တစ်ည၌နှစ်ကြိမ်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အရာရာကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်တကယ်တော့အော်ဂဇင်တစ်ခုကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာငါအတုယူခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်နားမလည်နိုင်သည့်အရာမှာကျွန်ုပ်အနှစ်သက်ဆုံးညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များထဲသို့ဝင်ရောက်သောအခါအဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်း၊ ဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်တတ်နိုင်ခြင်း - အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် Melissa လမ်းပေါ်တွင်ရှိနေသည် - သို့သော်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ရရှိသောအခါအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ ညာဘက်ရှိငါ့ရှေ့မှာ။ ငါ Melissa နှင့်ငြီးငွေ့စရာမဟုတ်, သူမကသူမအလွန် sexy နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ထင်ပါတယ်။
Robert သည်လိင်မှုကိစ္စမလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းသည်လူငယ်များအကြားတွင်မျှော်လင့်ထားသည်ထက်ပိုမိုများပြားသည်။ ၎င်းသည်သူ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။ တကယ်တော့ဒါဟာပို။ ပို။ သိသာဖြစ်လာနေသည် အွန်လိုင်း porn သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်ထဲမှာမဟုတ်ရင်ကျန်းမာယောက်ျားအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) နှင့်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် (DE) နှစ်ဦးစလုံး၏ထိပ်တန်းအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းလေ့လာမှု၌, အထီး porn အသုံးပြုသူများအဖွင်ခံရတိုးပွါးအခက်အခဲအစီရင်ခံတင်ပြ သူတို့ရဲ့အစစ်အမှန်ကမ္ဘာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များက။ ဤဖြစ်စဉ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသလားဟုမေးသောအခါဘာသာရပ်များကအစပိုင်းတွင်လိင်မှုကိစ္စ၌စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုရရှိစေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးများတိုးများလာခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုခံစားနေရသည့်အမျိုးသားများနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်။ အမှန်မှာ၊ အကယ်၍ သင်၏ယောက်ျားသည်၎င်းကိုမထနိုင်လျှင်၊ ဆက်၍ မထားနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်အော်ဂဇင်ကိုမရောက်ရှိနိုင်လျှင်သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးမှာလျော့နည်းသွားနိုင်သည်။
porn-သွေးဆောင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဘုံတိုင်ကြားချက်များပါဝင်သည်:
သူကမျှပြဿနာညစ်ညမ်းနှင့်အတူစိုက်ထူသို့မဟုတ်အော်ဂဇင်ရရှိရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လူတစ်ဦးအတွက်, မိမိဆန္ဒရှိမိတ်ဖက်နှင့်အတူသူတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူရုန်းကန်နေရတဲ့။
သူဟာလိင်ရှိသည်နှင့်သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပေမယ့်အော်ဂဇင်ရောက်ရှိကြာကြာကြောင့်ရန်အသုံးပြုသည်ထက်အများကြီးကြာနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သူ disengaged ပုံရသည်ဟုဆိုသည်။
သူကသူ့အဖော်တွေနဲ့တစ်ခုစိုက်ထူထိနျးသိမျးနိုငျ, ဒါပေမယ့်သာသည်သူ၏စိတျထဲတှငျအငျတာနကျ porn ၏ကလစ်ပ် replaying အားဖြင့်အော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
သူက ပို. ပို. ပို. ပြင်းထန်သောနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ရှာအစစ်အမှန်ဘဝလိင်မှညစ်ညမ်းကြိုက်နှစ်သက်သည်။
သူကသူ့အဖော် (မြင်ကြ porn, အမျိုးအစားများပုံများ, စသည်တို့ကိုကြည့်ခြင်းသုံးစွဲအချိန်ပမာဏ) မှ porn-related လျှို့ဝှက်ချက်များကိုစောင့်ရှောက်
သူ၏အဖော်သည်အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တူသည်။
ဤပြproblemနာသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်၏ကြိမ်နှုန်းကြောင့်မဟုတ်ပါ; ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသားများသည်နှစ်မျိုးလုံးအားလှုံ့ဆော်မှုအသစ်များဖြင့်အမြင်အာရုံကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟူသောအချက်နှင့်ပိုမိုဆက်စပ်သည်။ အမှန်ကတော့သူရဲ့လိင်မှုဘ ၀ ရဲ့ ၇၀၊ ၈၀ (သို့) ၉၀ ရာနှုန်းကိုတောင်သုံးခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာမရေမတွက်နိုင်အောင်ငယ်ရွယ်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊ အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသောမိတ်ဖက်များနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ၏ရုပ်ပုံများကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ဖန်တီးကာအချိန်ကုန်လွန်လာသည်။ သူ၏အသားအရေအသစ်၏အဆုံးမဲ့ချီတက်ပွဲထက်သွေးသားနည်းနည်းလှုံဆော်မှုနည်းသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အခုအတော်လေးကျယ်ပြန့်စွာမြင်တွေ့နေရသောအရာမှာရုပ်ပိုင်းအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်သာမကစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအစစ်အမှန်ကမ္ဘာနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်သွယ်မှုများကိုစိတ်မ ၀ င်စားကြောင်းပြသသည့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နှင့် Viagra, Cialis, Levitra နှင့်အလားတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ - ဒီဆေးတွေဟာသွေးကြောတွေကိုအားဖြည့်ဖို့အတွက်တစ်ခုတည်းကိုဖန်တီးဖို့မဟုတ်ဘဲအားဖြည့်ပေးလို့ပဲ။ ဦး နှောက်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်မိမိကိုယ်ကို ဦး စွာနှိုးဆော်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုမရှိရင်မည်သည့်ဆေးများကို“ စိုက်ထုတ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်း” ကိုအထောက်အကူမပြုပါ။
တကယ်တော့ဒီသတင်းကမကောင်းဘူး။ အားပေးမှုအတွက်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်ကိုသာကြည့်ဖို့လိုသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်စွဲလမ်းစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်ကိုသူ့ဟာသူပြန်လည်လည်ပတ်စေသည်ကိုလူသိများသည်။ ဤရွေ့ကား neurobiological အပြောင်းအလဲများ, များသောအားဖြင့်, ရပ်တန့်ရန်ခက်ခဲသောများနှင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားသူလူတို့တွင် relapse ဒါဘုံစေသည်အရာဖြစ်တယ်။ သို့သော်များစွာသောလေ့လာမှုများအရမူးယစ်ဆေးစွဲသူသည်ခြောက်လမှတစ်နှစ်အထိသမ္မာသတိရှိပါက ဦး နှောက်သည်ပုံမှန်အခြေအနေနှင့်အလွန်နီးကပ်သောအရာတစ်ခုခုသို့ပြန်သွားလေ့ရှိသည်။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအပါအ ၀ င်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများသည်အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ရောဂါကုသရန်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် ဦး နှောက်သည်မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ကြောင်းအထောက်အထားခိုင်လုံသောအထောက်အထားများကဖော်ပြသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်အဆိုအရ Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိတ်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့် ဦး နှောက်ကို“ reboot” လုပ်လိမ့်မည်။ အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှု (နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်မ ၀ င်စားမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသော) dopamine receptor များကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စေပြီးနောက်ဆုံးတွင် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ဆားကစ်များကိုအခြေခံအားနီးကပ်လာစေသည်။ တစ်နည်းဆိုရလျှင်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သူသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်လေလေ၊ သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ် ၀ င်စားမှုပျောက်ကွယ်သွားလေလေဖြစ်သည်။
ရောဘတ် Weiss LCSW, CSAT-S ကအတူလက်တွေ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါသည် ဒြပ်စင်အပြုအမူကနျြးမာရေး။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့်လူ့လိင်အကြားဆက်ဆံရေးတခုတခုအပေါ်မှာစာရေးဆရာနှင့်ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင်သူမစ္စတာ Weiss အများအပြားအခြားသူတွေအကြား, CNN သို့များအတွက်မီဒီယာအထူးကုအဖြစ် Oprah Winfrey ကွန်ယက်, New York က Times, The Los Angeles Times, နှင့်ယနေ့တွင်ပြရန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ။ မစ္စတာ Weiss ဟာဖြစ်ပါတယ် စာရေးသူ Cruise နဲ့ထိန်းချုပ်ရေး၏: ဂေးအမျိုးသားများအတွက်လိင်စွဲလမ်းကိုနားလည်ခြင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံး၏ဒေါက်တာဂျနီဖာ Schneider နှင့်အတူပူးတွဲရေးသားသူက်ဘ် Untangling: အင်တာနက်ခေတ်နှင့်လာမည့် 2013 လွှတ်ပေးရန်အတွက်လိင်, Porn နှင့် Fantasy obsessive, ပိုမိုနီးကပ်စွာအတူတကွထို့ပြင်အပြင်: အဆိုပါ သက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်းပါးများနှင့်အခန်းကြီးမြောက်မြားစွာနှင့်အတူလိင်, နီးစပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအပေါ်နည်းပညာနှင့်အင်တာနက် effect ။